Eng.Yariisoow Oo Sheegay in Lacagaha Canshuura Ah Ee Laga Qaado Shacabka Muqdisho lalunsado oo aysan ku dhicin Qasnadda DF-ka.
Thursday February 22, 2018 - 12:40:36 in Wararka by Super Admin
Khilaafka ku saabsan canshuuraha dheeriga ah ee lagusoo rogay ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa ismariwaa iyo kala shaki ka dhax abuuray madaxda dowladda Federaalka.
Xildhibaanno iyo siyaasiyiin katirsan dowladda Federaalka ayaa su'aalo ka keenay sababta keentay in lacago canshuur dulsaar ah ladul dhigo ganacsatada magaalada Muqdisho iyadoo canshuurtan aysan kajirin dhulka ay maamulaan maamul goboleedyada ay isbaheysiga yihiin Dowladda Federaalka.
Cabdi Raxmaan Yariisoow oo ku magacaaban guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si dadban uduray qorshaha uu watay Cabdi Raxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda wuxuuna sheegay in lacagaha canshuurta ah ee laga qaado shacabka Muqdisho aysan ku dhicin qasnadda dowladda!.
Yariisoow) ayaa sheegay in ay jiraan Canshuuro badan oo laga qaado Shacabka Muqdisho balse aaney ku dhicin qasnadda Dowladda oo ay si gaar ah u isticmaalaan dadka qaada Canshuurtaas iyo kuwa u dirsada ee amra in Canshuurtaas lasoo qaado.
Wuxuu carrabaabay in musuq maasuq badan uu ka jiro nidaamka canshuur qaadista degmooyinka gobolka Banaadir isagoo si dadban tooshka ugu ifinayay in qorshaha wasaaradda Maaliyadda uusan aheyn mid lagu qanci karo.
Yariisoow ayaa sidoo kale sheegay in Shacabka marba haddii Canshuur laga qaadayo ay tahay in ay helaan adeegyada muhiimka u ah bulshada haddii aan lahelayna ay adagtahay sida ay ubixiyaan canshuur dheeri ah.
Hadalkan kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka Banaadir ugu magacaaban Dowladda Federaalka ayaa imaanaya xilli shaqa joojin ay sameeyeen suuqyada ugu waaweyn Muqdisho sida suuqa Bakaaraha oo ah suuqa uweyn dalka Soomaaliya, Canshuurta dulsaarka ah ee wasiir Beyllo uu soo rogay ayaa loo badinayaa in aysan dhaqan geli doonin.